किन हुन्छ एलर्जी, कुन-कुन खानेकुराले गराउन सक्छ,कसरी जोगिने ? उपचार के हो? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
किन हुन्छ एलर्जी, कुन-कुन खानेकुराले गराउन सक्छ,कसरी जोगिने ? उपचार के हो?
प्रकाशित मिति: १५ चैत्र २०७४, बिहीबार
काठमाडौं । शरीरमा चिलाउने, रातो–रातो सानो फोका आउने गरेको भएमा त्यसलाई एलर्जी भनिन्छ। कसै–कसैको त्यो फोकाहरू बढ्दै जाने अनि कहिलेकाँही घाउ हुने समस्या हुन्छ। शरीर चिलाउनु र रातो–रातो साना फोकाहरू आउने सबैभन्दा बढी एलर्जी हुँदा हुनेगर्छ। कुनै छालाकै रंगको पनि हुनसक्छ कुनै रातोरातो पनि हुनसक्छ । यसलाई नै एलर्जी भनिन्छ।
हामीले खाएको खानादेखि लिएर आन्तरिक वा बाह्य रुपमा प्रतिक्रिया भई शरीरमा बेचैनी हुनु सामान्य भाषामा एलर्जी हुनु हो। एक वा विभिन्न बाह्य कारणले एलर्जी हुन सक्छ। एलर्जी एउटा क्षणिक समस्या भए पनि कतिपय अवस्थामा यसका कारण ज्यान नै जोखिममा पर्न सक्छ। एलर्जीको खास कारण नै शरीरमा प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुनु हो। खानेकुरा, प्रयोग गर्ने सामग्रीदेखि वातावरण र मौसमले समेत एलर्जी हुन्छ। शरीरको कनै तत्वको अगेनेष्टमा डेभलप गर्ने इमिनोलोजीकल रियाक्सनलाई मेडिकल भाषामा एलर्जी भनिन्छ।
एलर्जीको कारण धेरै छन्। संसारमा अहिलेसम्म थाहा पाएको मध्ये झण्डै चार हजार बाहिरी तत्वहरु छन् जसले गर्दा एलर्जी हुन्छ। यी तत्वहरु मध्ये जुन कुनैले पनि मान्छेलाई एलर्जी हुन्छ तर सबै मान्छेलाई एलर्जी हुन्छ भन्ने छैन।
कोही मान्छेलाई केही कुराले एलर्जी गर्छ कोहीलाई केही कुराले एलर्जी गर्छ। एलर्जीको कारण धेरै छ। धेरै भन्दा भन्दै पनि सबैभन्दा बढी एलर्जीको कारण के हो त? कुनै खानेकुरा हुन सक्छ कुनै लगाउने कुरा हुनसक्छ कुनै इन्जेक्सन लगाएको हुन सक्छ । पेटमा जुका परेर हुनसक्छ । कहिले संक्रमणले पनि हुन सक्छ।
सुई लगाउँदा अथवा कुनै किराहरूले टोक्यो भने पनि एलर्जी हुन्छ।
पेटमा जुका परेको छ भने पनि एलर्जी हुन्छ। बाहिर हिड्दा धुलो मैलोले पनि एलर्जी हुन्छ। फुलहरूको कणले पनि एलर्जी हुन्छ जसलाई हामीले देखेका हुँदैनौं सुक्ष्म खालका कारण कणहरू हुन्छन् यसले पनि एलर्जी गराउँछ।
कुनै पनि कुरालाई हुन्छौ भने, कुनै चिज हाम्रो शरीरको सम्पर्कमा आउँछ भने पनि यस्तो हुन्छ।
सबैभन्दा बढी एलर्जी गराउने मध्ये डिटरजेन्स एउटा कारण हो। साबुन, सरफ, लुगा धुने पाउडरले सबैभन्दा बढी एलर्जी गराउँछ। कुनै पनि प्रकारको केमिकलले पनि एलर्जी गराउँछ।
घडीका कारण एलर्जी हुनसक्छ। कानको मुन्द्राले पनि एलर्जी गराउँछ। गहना नक्कली छ भने पनि एलर्जी हुन्छ। कहिले काही परफ्यूमले एलर्जी गराउँछ।
कतिपए कस्मेटिक सामानले एलर्जी गराउँछ। अनुहारमा लगाउने क्रिम पाउडरले पनि एलर्जी गराउँछ। कपालमा रंग लगाउँदासमेत एलर्जी हुनसक्छ।
औषधिले पनि एलर्जी गराउँछ
मनिस सधै सञ्चो कोही पनि हुँदैन। बिरामी भएपछि औषधि खानै पर्‍यो। मान्छेलाई सबैभन्दा बढी एलर्जी गर्ने भनेको खाने औषधिले पनि हो। यसमा भन्नै पर्ने एउटा कुरा छ। मान्छेले जुन दिन औषधि खान्छ त्यही दिन एलर्जी हुन्छ भन्ने छैन। मान्छेले भन्ने गर्छ मलाई एलर्जी हुने भए पहिला किन भएन?
औषधि खाएको वर्षो भयो तर अहिले किन भयो भन्छ? त्यो कुरा बुझाउँन एलर्जी किन हुन्छ बुझ्न जरूरी छ। कोही मान्छेलाई सुरूमा एलर्जी नहुन पनि सक्छ। धेरै समयपछि पनि हुन सक्छ।
एलर्जीबाट कसरी जोगिने? उपचार के हो?
एलर्जी भयो भनेर जसले पनि भन्दिन सक्छ। रातो रातो फोका देख्यो चिल्चिलायो भने एलर्जी भयो भनेर भन्न सकछ। कहिलेकाँही एलर्जीले गर्दा स्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ अनि तुरून्तै अस्पताल जाने पनि हुन्छ। एलर्जी भयो भन्न सजिलो छ तर एलर्जीको उपचार गर्न गाह्रो छ।
सबैभन्दा पहिला उपचार गर्नुभन्दा केले गर्दा एलर्जी भएको हो भन्ने थाहा भएमा यसको जस्तो सजिलो उपचार केही पनि छैन। तर, यति धेरै एलर्जीका कारणहरु छन् जुन पत्ता लगाउन कठीन छ। यसका लागि हामी बिभिन्न परिक्षणहरू गर्छौ। कहिलेकाँही रगतको परीक्षण गर्छौ । कहिले एलर्जी प्याथचेस्ट गर्छौ। यो एलर्जी पत्ता लगाउने एक प्रकारको प्रविधि हो।
प्याथचेस्ट गरेमा एलर्जी कहाँ छ भन्ने त पत्ता लाग्नसक्छ। यसको पनि नराम्रो पाटो छ। सबै कारणहरुको परीक्षण गर्न सकिदैन। हामीले केही साझा कुराहरुको मात्रै परिक्षण गर्न सक्छौं। यसअर्थमा यसको उपचार कठिन पनि छ।
एलर्जीको कारण पत्ता लगाउन कहिलेकाही बिरामीले पनि निकै सोच्नुपर्छ डाक्टरहरुलाई पनि पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ।
आफूलाई थाहा भए पछि त्यो कुराको नजिक आउन भएन। यदी सकिन्छ भने गर्ने हो कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन् जुन हामीले रोक्न सक्दैनौं। नेपालीलाई भातमा एलर्जी भयो भने के गर्ने? कसैलाई रोटीमा एलर्जी हुनसक्छ। यस्तो बेलामा उपचारको पाटो अलग हुन्छ।
यसको उपचार एलर्जी जे कुराले गरेको छ त्योबाट बच्ने र बचाउन कोशिश गर्ने नै ठूलो कुरा हो । कहिलेकाँही यसोगर्दा पनि सकिदैन। काठमाडौंका मानिसलाई धुलोबाट बच भनेर सकिदैन। त्यस्तो बेलामा केही औषधिहरू प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। कर्टीको स्टोरेन्स भन्ने मलम हुन्छ। त्यस्तै मोस्सीलाइजर क्रीम लगाएर छालालाई फुस्रो हुन नदिने गर्नुपर्छ।
इमोडेन्ट, कटिकोस्टोरोइड, क्यालामेन्सको लोसन लगाएमा एलर्जी ठीक हुन सक्छ । त्यसपछि पनि भएन भने एन्टी स्टामीन्सहरु खानुपर्छ।
चिलाउन कम गर्ने औषधि पनि पाइन्छ। जो मान्छेलाई खाएर, लगाएर एलर्जी कम हुन्छ त्यो त गर्न सकिन्छ तर कहिलेकाही अति संवेदनशील अवस्था समेत आउँछ त्यस्तो बेलामा तत्काल अस्पतालमै जानपर्छ।
काठमाडौंमा बढी हुन्छ एलर्जी
धुलोका कणहरु नाकभित्र छिरेर नाक बन्द हुने, हाच्छ्युँ आउने, खोकी लाग्ने र घाँटी खसखस हुनु धुलोको एलर्जी हो । यस्तो समस्याबाट आम सहरिया मानिस र विशेष गरी धुलो धुवाँमा हिँडडुल गर्ने व्यक्ति प्रभावित हुने गरेका छन् ।
एलर्जी हुने नहुने मान्छे अनुसार भरपर्छ। कसैलाई धुलोले एलर्जी होला कसैलाई नहोला। तर, धुलो साझा कारण हो जसले प्रायः एलर्जी गराउँछ। धेरै कुराले एलर्जी गराउँछ। कतै खाल्डो, कतै हिलो अनि कतै धुलो छ जसले गर्दा एलर्जी हुन्छ।
जो मान्छे गाडीमा हिँडेको हुन्छ उसलाई धुलोले हुने एलर्जी कम हुनसक्छ। तर मोटरसाइकल, साइकल र सार्वजनिक गाडीमा हिँड्ने मान्छेलाई धुलो नखाइ हिड्दैन। यसले गर्दा राजधानीमाल बस्ने धेरैलाई एलर्जी हुन्छ।
यस्तै मौसम र वातावरण परिवर्तनसँगै मानिसलाई विभिन्न प्रकारका एलर्जी हुने गर्छ । चिसो मौसम सुरु हुँदा नाकबाट पानी वग्ने, निरन्तर हाच्छ्यूँ आउने गर्छ । त्यस्तै गर्मी मौसममा आँखा रातो हुनु, अनुहारमा डावर आउनु, छालाको कत्ला परिवर्तन हुने गर्छ। यो पनि एउटा एलर्जीको कारण हो।ब
सबै चिलाउने रोग एलर्जी होइन
कुनै पनि मान्छेलाई केही भयो भने एलर्जी भयो भन्छौ तर सबै चिलाउने रोग एलर्जी हुँदैन। कसैलाई लुतो आयो, डण्डीफोर आयो भने पनि हामी त्यसलाई एलर्जी भन्छौं। यो गलत हो। शरीरमा सानो फोका देख्नासाथ एलर्जी हुन्छ भन्ने होइन। डण्डीफोर आएको छ, लुतो छ भने त्यो एलर्जी होइन।
खानाको एलर्जीले मुख र घाँटी दुख्ने तथा सुन्निने, नपच्ने, बान्ता आउने, रिंगटा लाग्ने, पेट दुख्ने र पखाला लाग्ने हुन्छ । त्यस्तै श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने, खोकी लाग्ने र हाच्छ्यूँ आउने गर्छ । औषधी र कस्मेटिक एलर्जीले श्वास फेर्न गाह्रो हुने, छाला रातो हुने, फोका आउने, पसिना आउने, छाला खुइलिने आदि लक्षण देखिन्छ ।
कुन-कुन खानेकुराले गराउन सक्छ एलर्जी ?
फुड एलर्जी साधारणतया बच्चामा धेरै हुने गर्छ । जुनसुकै उमेर समुह तथा जो कसैलाई हुन सक्ने यस्तो समस्या ४० वर्ष भन्दा कम उमेर समूहका मानिसलाई बढी हुने गर्छ ।
फुड एलर्जी भएमा कसैलाई भण्टाका कारण एलर्जी हुने गर्छ भने कसैलाई अण्डाको एलर्जी हुने गर्छ । एलर्जी भएमा पेट फुल्ने, पेट दुख्ने, वाकवाकी ,वाग्ने, वान्त हुने, दिशा लाग्ने, शरीरमा विमिरा आउने, फोका आउने गर्दछ ।
यस्ता समस्या कसैमा २-४ मिनेटसम्म रहन्छ भने कसैलाई दुई-चार घण्टा सम्म पनि भइरहन सक्छ ।
किन हुन्छ फुड एलर्जी ?
जब व्यक्तिको शरीर खानाप्रति बढी कि्रयाशील हुन्छ, त्यतिबेला फुड एलर्जीको समस्या पैदा हुने गर्छ । यति सम्मकी कहिलेकाही प्रोटिनयुक्त खानेकुरा पनि शरीरका लागि हानीकारक हुने गर्छ ।
मानव शरीरको पाचन तन्त्रमा इम्युन सिस्टम हुन्छ, जसलाई इम्युनोग्लोविन ‘ई’ भन्ने गरिन्छ । यसले शरीरमा एलर्जी गराउने कारकतत्व विरुद्ध लड्ने गर्छ ।
के हो फुड एलर्जी ?
हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले भाइरस, वैक्टेरिया, लगायतका विषादीसित लड्छ । केही व्यक्तिको रोग प्रतिरोगात्मक सिस्टमले त्यस्ता पदार्थ प्रति पनि प्रतिकि्रया जनाउँछ, जसले शरीरलाई खासै हानी गर्दैन ।
एलर्जिक प्रतिकि्रयाका दौरान रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले लिम्फोसाइड अधिक सकि्रय बनाउँछ, जसलाई टी सेल र बी सेल भनिन्छ ।
टी सेल र बी सेलले शरीरमा एन्टीबडी बनाउँछ । यसले बाहिरी तत्वलाई नष्ट गर्छ । तर जो व्यक्तिलाई खानाको एलर्जी छ, उनीहरुको शरीरले कुनै विशेष पर्दाथ माथि एन्टी बडिज इमोनोग्लोव्युलिन ‘ई’ तथा एक रसायन हिस्टामिन बनाउँछ । जुन कोषिकामा यो उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँ सम्बन्धित खानाको एलर्जीको लक्षण देखिन थाल्छ ।
खानाको एलर्जी प्रति शरीरले दुई तरीकाबाट प्रतिकि्रया जनाउँछ, फुड एलर्जी तथा अपच । कयौ खाना यस्ता हुन्छ, जसलाई हाम्रो शरीरले सजिलै पचाउन सक्दैन । जस्तै दूध । दूधलाई हाम्रो शरीरले सजिलै पचाउन सक्दैन जसका कारण अपच हुने वा पखाला हुने गर्छ । यस्ता एलर्जी गम्भीर हुनुका साथै शरीरका लासगि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।
१. गाईकेा दूध वा अन्य दूग्धजन्य उपात्दन